Kpuchiri ihe n'ihu akwa nhicha, Baby akwa nhicha, Royal Velvet akwa nhicha, blanket Manufacturer - Bailixin
Emikpu na ụwa nke nanị na oké ọnụ home akwa na ụlọ ọrụ anyị! Anyị na-enye akwa nhicha na blanket maka ezinụlọ ọ bụla na ihe ezi uche ahịa.
Pịa na-amụta banyere anyị
Anyị na-apụta collections soft bath towel tent, jụụ microfiber egwuregwu towel tent na osimiri akwa nhicha, mbiet kichin towel tent na bed blanket set.Comprehensive elekọta ahụ ike gị.
Efu ighikota Yarn Series
Water Absorption Na 3S No Fluorescent Ukwu, Environmentally Enyi na Enyi
ise-Star Hotel Standard
European Na American Style Design
Anọ oyi akwa fere fere blanket
Lezie kpara Technology
Olee otú Họrọ akwa nhicha
Ịzụ akwa nhicha bụ a touchy usoro. Chọpụta, ị chọrọ ịzụ akwa nhicha na-eche adụ na dara oké ọnụ, ma gịnị ka 'gram ọnụ' pụtara? Ma olee otú i na-agwa dị iche n'etiti Turkish owu na Ijipt owu ma ọ bụ bulie si a egwurugwu nke na agba na ihe nakawa etu esi? Tupu ị nditop ke towel kwa anya, iwepụta oge na-agụ anyị kemfe ndu n'okpuru. Anyị na-na zukọtara na grouped ihe niile ị chọrọ ịma banyere otú ịhọrọ akwa nhicha n'ime ise isi ige, si size na arọ ka ewu, nke mere na gị search ga-aga dị ka were were dị ka o kwere.
Saa na ukwuu omo
Mere na ọ bụ a nsogbu: Ukwuu omo pụrụ n'ezie stiffen akwa nhicha. Plus, ọ bụghị dị mkpa. "Akwa nhicha ama banye mmapụta ncha si na anyị na ozu, na n'ihi na ha na-eji nkụ dị ọcha akpụkpọ, ha adịghị nwere na ọtụtụ unyi," na-ekwu Donna Smallin Kuper, gbaara ụlọ ihicha ẹkesikpede na-ede akwụkwọ nke nhicha Plain & Simple. Ngwọta: Jiri ọkara omo ị ga-mkpa maka a nkịtị na-asacha, ma ọ bụ kwuo ya "ihe ọ bụla di na nwunye nke washes na dị na-eji mmanya," na-ekwu Carolyn Childers, isi home uweojii nke Handy ..
A Guide to Ịzụchapụta blanket
Mgbe abalị okpomọkụ iri a idahari, iru maka a blanket ịgbakwunye ihe mmezi oyi akwa nke mma ịhụnanya gị bed. Blanket na-aga-adịghị ahụ anya na unsung - na ọ bụ gị nkasi obi ma ọ bụ duvet na-ewe n'elu ịgba ụgwọ dị ka kpakpando nke bed, na gị Ibé akwụkwọ na-enye ndị mmetuaka nke softness akpụkpọ gị achọsi, ma ọ bụ na blanket, tucked na n'etiti abụọ, na-emepụta ihe mmezi n'akpa uwe nke ikuku na-ị na-ekpo ọkụ. Mgbe ọ na-abịa na-azụ a blanket, i nwere ike na-eche na e nwere '.
Ò nwetụla mgbe ị nụrụ nke a achara blanket? Ọ bụ ihe magburu onwe ngwaahịa na awade nza nke nkasi obi. Ndị a blanket na-mere si ultra soft achara eriri na-eme ka ọ a obi ụtọ dị ukwuu n'ihi na ị na snuggle in.Bamboo blanket na-họọrọ site na ọtụtụ ruru ya softness na awade enwekwukwa obi. Achara bụ ma ama maka ya antibacterial Njirimara. O nwere achara Kun, nke bụ a eke antibacterial n'ụlọnga. Ọ nwere ike na-egbu nje bacteria na pests na inwe oké egwu ike.